आफुसंग भएको पुरानो नोट यसरि बिक्रि गर्नुहोस र लखपति बन्नुहोस् – Nepal Sandesh
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन । इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr ! यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ ।
केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ । तपाई संग नेपाली पुरानो नोट छ रु यसरि बिक्रि गर्नुहोस इन्टरनेटमा । आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि अपलोड नगर्नु होला eBay को नियम अनुसार नक्कली सामग्री बेच्न पाइदैन त्यसैले सत्य र सहि मात्र बिक्रि गर्नु होला । eBay एउटा माध्यम हो डिल व्यक्तिगत तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ । eBay मा एउटा भारतीय नोटको मूल्य यति कायम गरिएको छ ।
यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने भद्यबथ को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ १ त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् । उक्त वेबसाइटमा गएर बगअतष्यल बटनमा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईको नोटमा कति जना मान्छे ले खरिदको लागि विड गरेका छन् सबै हेर्न मिल्ने छ ।
यदि तपाई संग धेरै पुराना नोट हरु छन् भने इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ तपाई । प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन मान्छे हरु ।
के तपाई संग नेपाली पुराना रूपैया छन् रु छन् भने आजै भदबथ को खाता बनाएर बिक्रि सुरु गरिहाल्नुहोस् १ छैनन् भने यो पोस्ट सेयर गर्नुहोस भएका हरुले थाहा पाई आफ्नो पैसा बेच्न पाउन । विश्वास नलागे तलको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नोस
घरमै बसीबसी ई-सेवा बाट बिजुलीको बिल यसरी तिर्नुहोस्